नेपालविरुद्व खेल्ने विश्वका स्टार ५ खेलाडी - Paschimnepal.com
नेपालविरुद्व खेल्ने विश्वका स्टार ५ खेलाडी
काठमाडौँ । एक दिवसीय मान्यता पाएको नेपालको धोको छ, टेस्ट र एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने ।
हालसम्म नेपालले एक पटक मात्र विश्वकपको अनुभब लिएको छ । सन् २०१४ मा बंगलादेशमा भएको टी ट्वान्टी विश्वकपमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो ।
क्रिकेट संघ निलम्बनमा रहेको कारण नेपालले बिभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ । आफुसंगै क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका राष्ट्रले विश्वकपमात्र नभएर टेस्ट समेत खेलिसकेका छन् । तर नेपालले भने आफ्नो एक दिवसीय मान्यता पनि सदुपयोग गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
उमेर समुहमा नेपालले यु–१९ विश्वकपमा सात पटक प्रतिस्पर्धा गरिसकेका छन् । सन् २००० मा नेपालले पहिलो पटक यु–१९ विश्वकप खेलेको थियो । जसमा नेपालले आठौं स्थान प्राप्त गर्दै ईतिहास रचेको थियो ।
तर, सात पटक विश्वकप खेलेपनि नेपालले आठौं स्थान भन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । पहिलो सहभागिता र सन् २०१६ मा नेपालले आठौं स्थान हात पारेको थियो ।
नेपालले यु–१९ विश्वकपमा सधै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको छ । नेपालले विभिन्न टेष्ट राष्ट्रलाई समेत पाखा लगाएको ईतिहास छ । नेपालले विश्वकपमा जिम्बाबे, बंगलादेश, आयरल्याण्ड, न्युजिल्यान्ड र दक्षिण अफ्रिका जस्ता राष्ट्रलाई पराजित गरिसकेको छ ।
नेपालले यु–१९ विश्वकपमा पराजित गरेको राष्ट्रका खेलाडीले विश्वमा ठुलो नाम कमाएका छन् तर त्यस्ता खेलाडीलाई पराजित गरेका नेपाली खेलाडी भने संस्थागत प्रणालीको सिकार बन्दै नाजुक अवस्था ब्यहोर्नुपरेको छ ।
नेपाली खेलाडीले पराजित गरेका विश्वका उत्कृष्ट ५ खेलाडीको सुचि प्रस्तुत गर्दैछौ ।
१. टिम साउथी
न्युजिल्याण्डका मुख्य फास्ट बलर टिम साउथी विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट बलर मध्येका एक हुन् । यु–१९ टिमबाट राष्ट्रिय टोलीमा आउन सफल उनले विश्वकप खेलिसकेका छन् । आसन्न विश्वकपमा समेत उनले न्युजिल्याण्डको टिमबाट सहभागिता जनाउने छन् ।
सन् २००६ को यु–१९ विश्वकपमा नेपालविरुद्वको खेलमा उनले ६ बलमा ६ रन बनाएका थिए । उनी शरद भेसवाकरको बलिङमा महेश क्षेत्रीले स्टम्पिङ गर्दै पोविलियन फर्काएका थिए । नेपालबिरुद्द ४ ओभर बलिङ गरेका साउथीले २५ रन खर्चेका थिए । तर कुनै विकेट हात पार्न सकेका थिएनन् । सो खेलमा नेपालले १ विकेटको रोमान्चक जित हात पारेको थियो ।
२. स्टिभ स्मिथ
अस्ट्रेलिया तथा विश्व क्रिकेटका उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान स्टिभ स्मिथले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै अस्ट्रेलियालाई सन् २०१५ को विश्वकपको उपाधि दिलाएका थिए । उनी आउने विश्वकपमा पनि अस्ट्रेलियाको ब्याटिङ लाइनअपमा मुख्य भुमिकामा रहनेछन् ।
सन् २००८ को यु–१९ विश्वकपमा समुह चरणको खेलमा नेपालले अस्ट्रेलियासंग प्रतिस्पर्धा गर्दा स्मिथ समेत टिममा रहेका थिए । नेपालबिरुद्द उनले २५ बलमा १७ रन बनाउँदै क्याच आउट भएका थिए । बलिङतर्फ ६ ओभर १ बल गरेका उनले १ मेडेन सहित ३ विकेट हात पारेका थिए ।
३. मोइन अली
इंग्ल्याण्डका अल राउण्डर अलीले सन् २००६ को यु–१९ विशाकपमा नेपालबिरुद्द अर्धशतकीय इनिङस खेलेका थिए । उनले ८२ बलमा ५२ रन बनाउदा शरद भेसवाकरको बलमा आउट हुन पुगेका थिए ।
४. ऋषब पन्त
भारतका युवा विकेटकिपर ब्याट्सम्यान पन्त निकै आक्रमक ब्याटिङ गर्ने गर्छन् । सन् २०१६ को विश्वकपमा नेपालले भारतको सामना गर्दा उनले यु–१९ विश्वकप इतिहासमा छिटो अर्धशतक प्रहार गरेका थिए ।
उनले २४ बलमा ७५ रन बनाउँदा प्रेम तामाङको बलमा आउट भएका थिए । सो विश्वकपपछि उनलाई चर्चित फ्रेन्चाइज लिग आईपीएलमा तत्कालिन दिल्ली डेयरडेभिल्सले महँगो मुल्यमा अनुबन्धन गरेको थियो ।
५. युवराज सिंह
भारतलाई सन् २०११ को विश्वकप दिलाउन मुख्य भुमिका खेलेका खेलाडी हुन्, युवराज सिंह । उनले विश्वकपमा एकै ओभरमा ६ वटै छक्का प्रहार गर्ने विश्व कीर्तिमान समेत बनाएका छन् ।
यस्ता प्रतिभावान् खेलाडीबिरुद्द नेपाली खेलाडीले समेत सन् २००० को यु–१९ विश्वकप खेलेका थिए । नेपालबिरुद्दको खेलमा उनले ९ ओभर बलिङ गर्दै १५ रन खर्चदै ४ विकेट हात पारेका थिए । सो खेलमा नेपाल ८ विकेटले पराजित भएको थियो ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, जेष्ठ १२, २०७६ 6:08:19 PM
Prevमदिराले मातेर शिक्षक कुट्ने तीनजना पुगे प्रहरी खोरमा
Nextविदेशको कुन कम्पनीबाट कस्तो पदमा माग आयो भन्ने अनलाइनमै हेर्न मिल्ने